काँग्रेस उम्मेदवार भँडेललाई मातृशोक
१५ मंसीर, भक्तपुर । यही मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि भक्तपुर क्षेत्र नं १ प्रदेश नं १ (क) का प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्नु भएका नेपाली काँग्रेसका कृष्णलाल भँडेललाई मातृशोक परेको छ । चाँगुनारायण नगरपालिका–४ निवासी उम्मेदवार भँडेलकी आमा सेतीमायाको आज बिहान ८६ वर्षको उमेरमा मध्यपुर अस्पतालमा निधन भएको हो ।
उनलाई उच्च रक्तचाप भएपछि तीन दिनअघि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । नेपाली काँग्रेसले घरदैलो र चुनावीसभा तीव्र पारेको बेलामा उम्मेदवार भँडेललाई मातृशोक परेको हो । काँग्रेसको आजको बागेश्वरीका लागि तय गरिएको चुनावसभा स्थगित गरिएको छ भने अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि काँग्रेसले घरदैलो र चुनावीसभालाई स्थगन गरेको जनाएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले भन्यो-तल्लो क्षेत्रमा माछा नमार्नू, पौडी नखेल्नू
२२ असार, मेलम्ची । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पानीको मुहानभन्दा तल्लो…
औषधि पसलेको मनोमानी, ‘रु ६० को औषधि २४०० !
२० असार, मेलाम्ची । सिन्धुपाल्चोकका केही औषधि पसलले लकडाउनको फाइदा…
नुवाकोटमा पिसिआर ल्याब स्थापना गर्न वाग्मतीलाई अनुरोध
राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा तपाई पनि प्रतियोगि बन्ने की !
भोटेकोशी आयोजनाले माग्यो कर्मचारी, दिने होइन त आवेदन ?
आज १४६२ जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किए, निको हुनेको संख्या ४६५६ पुग्यो ५ दिन पहिले | संसार न्यूज़
आज पनि ८२३ जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किए, हेर्नुहोस् कुन प्रदेशमा कति निको भए त ? ३ दिन पहिले | संसार न्यूज़